कुनै खानेकुरा तारेर, भुटेर बाँकी रहेको तेल कतिपटक प्रयोग गर्न सकिन्छ ? | सुदुरपश्चिम खबर
कुनै खानेकुरा तारेर, भुटेर बाँकी रहेको तेल कतिपटक प्रयोग गर्न सकिन्छ ?
कुनै खानेकुरा तारेर, भुटेर बाँकी रहेको तेल के गर्ने ? अक्सर हाम्रो मनले भन्छ, ‘होइन, किन फ्याक्ने । अर्को पटक फेरी काम लाग्छ ।’ हामी कुनै खानेकुरा तारेर बाँकी रहेको तेललाई जतनसाथ राख्छौं । अब सोही तेल अर्को खानेकुरा पकाउन उपयुक्त हुन्छ ? कुरा स्वादको होइन । स्वास्थ्यको हो । के भनिन्छ भने, पटक पटक तेल प्रयोग गर्दा त्यो विषाक्त बन्छ ।
जब हामी कुनै पनि खानेकुरा डिपफ्राई गर्छौ, सुरुमा त यसले खानालाई डिहाईड्रेट गर्छ । तर पछि यसको रियाक्सन स्वरुप खानाबाट प्रोटिन र कार्बोहाईड्रेट टुक्रिने गर्छ । जसले गर्दा खाना खैरो रङ्गको देखिने गर्छ । त्यतिमात्र हैन, यस प्रकारको खाना पकाउने शैलीले फ्रि ¥याडिकल्स उत्पन्न गरी यसको पुन प्रयोगले स्वास्थ्य सम्बन्धि विभिन्न समस्या निम्त्याउने गर्छ ।
उक्त तेल बाक्लो, चिल्लो तथा गाढा रङ्गको छ भने त्यस्ता तेलको प्रयोग गर्नु हुँदैन । त्यस्तै, खुला ठाउँमा राखिएको फोहर तथा अशुद्ध तेल प्रयोग गर्नबाट पनि बच्नुपर्छ । (urlabarinews.com बाट सभार)
संसद विघटन विरुद्धका रिटहरुको सुनुवाइ आज !!